Boky fitsangatsanganana 10 be indrindra ho an'ireo mpitia mpihaza | Vaovao momba ny dia
Lola curiel | | General, Ocio, Tsangatsangana
Ny fitsangatsanganana dia iray amin'ireo hetsika mampientanentana sy mampanan-karena indrindra eto an-tany. Na izany aza, indraindray isika dia voatery manala ny faniriantsika hitrandraka noho ny filàna mijanona amin'ny toerana raikitra na noho ny tsy fisian'ny fialan-tsasatra. Vakio ny toerana lavitra eto ambonin'ny planeta ary fantaro ny zavatra niainan'ireo mpandeha hafa, dia fomba tsara hamonoana ny bibikely ary manomboka mandamina ny làlanao manaraka. Avelako amin'ity lisitra ity ianao ny lisitr'ireo izay ho ahy ireo boky fitsangatsanganana 10 tsara indrindra ho an'ireo tia traikefa nahafinaritra Aza adino izany!
1 Ny fomba fohy indrindra
2 Any Patagonia
3 Italia Suite: Fitsangatsanganana any Venise, Trieste ary Sisila
4 Fiposahan'ny masoandro any Azia atsimo atsinanana
5 Ny nofin'i Jupiter
6 Torolàlana ho an'ireo mpandeha tsy manan-tsiny
7 Aloky ny làlan'ny landy
8 Fitsangatsanganana dimy any amin'ny helo: Adventures miaraka amiko ary hafa koa
9 Mankany amin'ny lalan-dia
10 Taratasy telo avy any Los Andes
Ny fomba fohy indrindra
12 taona taty aoriana, nitantara ny mpanao gazety Manuel Leguineche ao amin'ny "Ny fomba fohy indrindra" niaina tao anatin'ny Expedition an'ny World Record, dia iray izay nanomboka tany amin'ny saikinosy sy izay naka ireo mpiaro azy mba handeha 35000 km mahery amin'ny 4 x 4. Ary koa dia ny tantaran'ny zazalahy iray izay, miaraka amin'ny faniriana bebe kokoa noho ny traikefa, dia nametaka ny tenany hanatanteraka nofy: "Mandehandeha eran'izao tontolo izao".
Nandalo ilay dia, izay naharitra roa taona mahery Afrika, Azia, Aostralia ary Amerika, tamin'ny fotoana niadian'ny firenena 29 teny an-dalana. Tsy misy isalasalana, tantara iray mampihetsi-po ary tsy maintsy vakiana ho an'ireo tia fanatanjahantena efa voalaza tsara.
Jereo izao amin'ny Amazon
Kilasika amin'ny literatiora fitsangatsanganana, tantara iray tena manokana izay natomboka tamin'ny fahazazan'ny mpanoratra azy, Bruce Chatwin.
Raha mitady henjana ianao dia mety tsy ity ilay boky tadiavinao, satria indraindray ny zava-misy dia mifangaro amin'ny fahatsiarovana sy tantara fictitious. Fa raha manandrana ianao dia hankafy ny dian'i Chatwin ary ho hitanao ny votoatin'ny Patagonia, iray amin'ireo toerana mahagaga indrindra eto ambonin'ny planeta.
Italia Suite: Fitsangatsanganana any Venise, Trieste ary Sisila
Ny famokarana haisoratra nataon'i Javier Reverte izay nifantoka indrindra tamin'ny dia dia tena nanolorana azy ho nofy ny toerana tsara indrindra nefa tsy hiala trano.
Italyanina Suite: Ny dia mankany Venice, Trieste ary Sisila dia saika lahatsoratra literatiora izay nanoratan'i Reverte mitondra antsika any amin'ny tontolo mahafinaritra sy mahasarika indrindra any Italia. Ho fanampin'izay, ny tantaram-pitetezana dia mifangaro tantara sy tahirin-tantara izay manampy amin'ny fahatakarana bebe kokoa ny faritra.
Fiposahan'ny masoandro any Azia atsimo atsinanana
Iza no mbola tsy nieritreritra ny handrava ny monotony? Nanapa-kevitra ny mpanoratra Dawn any Azia atsimo atsinanana, Carmen Grau, fa handroso ary hiala amin'ny asany hiaina traikefa nofinofisiny hatrizay. Nandao ny fiainany tany Barcelona izy ary nilanja kitapo, nanomboka nanao dia lavitra izy.
Nandritra ny fito volana dia nitety tany izy Thailand, Laos, Vietnam, Kambodza, Burma, Hong Kong, Malaysia, Sumatra, ary Singapore. Ao amin'ny bokiny dia mizara ny antsipirian'ny zava-niainany izy, ny dia an-tsambo, ny bisy, ny lamasinina ary ny alina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Ny nofin'i Jupiter
Tao amin'ny nofin'i Jupiter, ilay mpanao gazety Ted Simon dia nitantara ny zava-niainany nitety an'izao tontolo izao tamin'ny moto Triumph. Nanomboka ny diany i Simon tamin'ny 1974, avy tany Royaume-Uni, ary nandritra ny efa-taona dia nitety firenena 45 manontolo izy. Ity boky ity dia ny tantaran'ny lalàny namakivaky ireo kaontinanta dimy. Raha anisan'ireo tia aspalta ianao dia tsy hadino izany!
Torolàlana ho an'ireo mpandeha tsy manan-tsiny
Aza manantena mpitari-dalana mahazatra rehefa mamaky an'ity boky ity. Mark Twain, izay mety ho fantatrao ho mpamorona an'i Tom Sayer, dia niasa tamin'ny taona 1867 tao amin'ny gazety Alta California. Tamin'io taona io ihany dia nandao an'i New York izy ny fitsangatsanganana fizahantany voalamina voalohany amin'ny tantara maoderina ary i Twain dia tonga nanoratra andian-tantara tamin'ny fangatahan'ny gazety.
Ho torolàlana ho an'ireo mpandeha tsy manan-tsiny manangona io dia lavitra io izay hitondra azy avy any Etazonia mankany amin'ny Tany Masina ary, miaraka amin'ny filazalazana azy, dia nitantara ny lalany namaky ny moron'ny Mediteraneana sy namaky ireo firenena toa an'i Egypt, Greece na Crimea izy. Ny teboka tsara iray hafa amin'ny boky dia ny fomban'i Twain, manana vazivazy tena mampiavaka azy izay mahatonga ny famakian-teny hahafinaritra sy tena mahafinaritra.
Aloky ny làlan'ny landy
Colin Thubron dia mpanoratra ilaina amin'ny literatiora momba ny dia, iray amin'ireo mpandeha tsy misy reraka izay nanao dia mihoatra ny antsasaky izao tontolo izao ary mahalala ny fomba hilazana azy tsara. Nahazo loka be ny sangan'asany ary nadika tamin'ny fiteny 20 mahery. Ireo boky voalohany navoaka tao amin'ilay karazana dia nifantoka tamin'ny faritra Afovoany Atsinanana ary, taty aoriana, nifindra tany USSR teo aloha ny diany. A) Eny, mifindra eo anelanelan'i Azia sy Eurasia ny bibliôgrafia momba ny dia nataony ary amboary ny tena izy Taratra X amin'ity faritra midadasika amin'ny planeta ity izay misy fifandirana, fanovana politika ary tantara mifangaro amin'ny fomban-drazana sy ny endrika.
Tamin'ny 2006, namoaka i Thubron The Shadow of the Silk Road, boky iray izay izarany ny diany tsy mampino amin'ny zotra lehibe indrindra manerantany. Nandao an'i Sina izy ary namakivaky ny ankamaroan'ny Azia mba hahatratra ireo tendrombohitra any Azia Afovoany, maherin'ny iraika ambin'ny folo kilometatra kilometatra tao anatin'ny 8 volana. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity boky ity dia ny sanda nomen'ny mpanoratra azy. Nandeha nitety faritra maro tamin'ireo firenena ireo izy taloha ary, niverina taona maro taty aoriana, tsy vitan'ny hoe sitrana fotsiny ny tantaran'ny làlana iray izay tena zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny varotra tandrefana, manome ny fampitahana sy ny fahitana ny fomba nanovana ny fiovana sy ny fikomiana izy. faritra.
Fitsangatsanganana dimy any amin'ny helo: Adventures miaraka amiko ary hafa koa
Martha Gellhorn dia mpisava lalana an'ny mpampita ady, ilay mpanao gazety amerikana dia nandrakotra ny fifanolanana tamin'ny taonjato faha-XNUMX tany Eropa, nandrakotra ny Ady Lehibe Faharoa, dia iray tamin'ireo voalohany nitatitra momba ny toby fitanana Dachau (Munich) ary nanatri-maso ny fizarana Normandy aza.
Gellhorn dia nandalo ny tranga nampidi-doza indrindra teto ambonin'ny planeta ary ny loza dia mitohy hatrany amin'ny fiainany, in Fitsangatsanganana dimy any amin'ny helo: Adventures miaraka amiko ary hafa koa, miresaka momba ireo zava-tsarotra ireo, dia a fanangonana ny tsara indrindra tamin'ireo dia lavitra nataony izay ilazany ny fomba niatrehany tahotra sy fitsapana nefa tsy nanary toky. Ity boky ity dia misy ny diany mamaky an'i Shina miaraka amin'i Ernest Hemingway nandritra ny Ady Sinoa-Japoney Faharoa, ny diany namakivaky ny Karaiba hitady sambo mpisitrika Alemanina, ny lalany namakivaky an'i Afrika ary ny nandehanany namaky ny Russia of the USSR.
Mankany amin'ny lalan-dia
En Mankany amin'ny lalan-dia Ny mpanoratra amerikanina Jon Krakauer dia nitantara ny Christopher Johnson McCandless, tovolahy iray avy any Virginia izay tamin'ny 1992, rehefa nahazo diplaoma tamin'ny History and Anthropology avy amin'ny Emory University (Atlanta), manapa-kevitra ny hanome ny volany rehetra ary handeha hanao dia hatrany amin'ny halalin'i Alaska. Niainga izy nefa tsy nanao veloma ary tsy nanana fitaovana firy. Efatra volana taty aoriana dia hitan'ny mpihaza ny fatiny. Ny boky dia tsy mitantara ny dian'i McCandless fotsiny, mandinika ny fiainany sy ny antony izay nitarika ny tovolahy iray tamina fianakaviana manankarena hanome fiovana mahery vaika toy izany.
Taratasy telo avy any Los Andes
Ny faritra be tendrombohitra any Andes Peroviana dia iray amin'ny toeran-kaleha ankafizin'ny olona tia fizahantany natiora sy fitsangatsanganana. Ao amin'ny taratasy telo avy any Andes, ilay mpizahatany Patrick Leigh Fermor dia mizara ny lalany namakivaky ity faritra ity. Nanomboka ny diany tao an-tanànan'i Cuzco izy, tamin'ny 1971, ary avy teo nankany Urubamba. Mpinamana dimy no niaraka taminy, ary angamba ny toetran'ny vondrona dia iray amin'ireo singa manintona indrindra amin'ity tantara ity. Ny fitsangatsanganana dia samy hafa be, ahitana poeta miaraka amin'ny vadiny, skier sy mpanao firavaka matihanina soisa, antropolojista ara-tsosialy, aristocrat Nottinghamshire, andriana ary Fermor. Notantarainy tao amin'ny boky ny zavatra niainan'ilay vondrona, ny fifamenoan'izy ireo na dia samy hafa be aza izy ireo ary ny fomba fahitan'izy ireo an'izao tontolo izao sy ny tsirony amin'ny dia an-tongotra no mampitambatra azy ireo.
Fa ankoatran'ny tantara, tsy isalasalana fa manintona tokoa, Taratasy telo avy any Andes Gut dia lavitra mahavariana izay miainga avy any an-tanàna, hatrany Cuzco, hatrany amin'ny toerana lavitra indrindra ao amin'ny firenena. Ireo mpitsangatsangana dimy dia niainga avy tany Puno nankany Juni, akaikin'ny Farihy Titicaca, ary avy tao Arequipa dia niainga ho any Lima. Ny pejy amin'ity boky ity dia mitondra anao any amin'ny toerana tsirairay Tsy misy tantara tsara kokoa hanakatonana an'ity lisitr'ireo boky fitsangatsanganana 10 tsara indrindra ho an'ireo mpitia fitsangatsanganana ity!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ocio » Boky fitsangatsanganana 10 be indrindra ho an'ireo mpitia mpizaha tany